Butler Audio Model 5150 5-channel Power Amplifier - Review Review
Ny Butler Audio dia nanambatra ny tsara indrindra amin'ny fantsom-pahavoazana miaraka amin'ny rafitra matihanina matihanina amin'ny alàlan'ny fampiharana herinaratra izay hampifaly ireo mpankafy teatra an-trano ary ireo audiophiles tena manahirana indrindra.
Hifanaraka amin'ny Old ny Old
Ny Butler 5150 dia amperim-pahefana 5-channel miaraka amin'ny singam-pifampizarana samihafa izay mampiseho ny fidirana an-tserasera sy ny vokatra avy amin'ny mpandahateny ho an'ny sehatra tsirairay. Ny endriny tsy manam-paharoa ao anatiny dia manasongadina roahin'ny 6SL7GC vaky fitsangatsanganana ho an'ny sehatra tsirairay ao anatin'ny sehatra ampitaovana hanomezana feo marina. Io fanasongadinana io dia manafoana ny filàn'ny transformer mpanodina amin'ny fomba mahazatra.
Fifandraisana mora; Ny fidirana an-dàlam-peo RCA tokana andoavam-bola tokana sy ny adidy amam-pitaovam-piadiana an-tariby dia omena ho an'ny sehatra tsirairay. Ny famindrana herinaratra an-davaka dia misy amin'ny fampidiran-dresaka 8-13VDC.
Ny singa iray on / afela dia eo amin'ny tontonana, nefa tsy misy tombontsoa na fanaraha-maso volavola ho an'ny amperora (s), ny tombony dia miditra anaty ao anaty fahatsapana 1.5v. Ny laharam-pahamehana rehetra dia tsy maintsy atao amin'ny fampiasana processeur préférence na AVP.
5 x 150 Watts RMS per channel à 8 ohms ou 5 x 225 Watts RMS per channel @ 4 ohms (All Channels Driven)
Frequency Response: 20Hz hatramin'ny 20kHz (+/- 0.5dB)
THD : <0.10% @ 8 Ohms, <0.15% @ 4 Ohms
S / N (Signal-to-Noise) Ratsy : Better than 110dB (A-Weighted)
Tondin-daty: 15v / μsec
Ny fahitana fahamendrehana: 1.5V ho 150 watts ho 8 ohms
Ny tsy fahampian'ny herinaratra (rehefa tsy misy fanamafisana): Approx. Watt 120 (eo amin'ny 1A @ 120VAC na 0.5A amin'ny 230VAC)
AC Power Draw / Consumption rehefa ampiasaina:
1200 Watts rehefa mihazakazaka 8 ohm mpiteny - 10 Amps (120VAC), 5 Amps (230VAC)
1800 Watt rehefa mandeha 4 ohm mpandray feo - 15 Amps (120VAC), 8 Amps (230VAC)
Dimensions: 17-inches Wide x 16-inch Deep x 8.5-inches Height w / feet (7-inch High w / o feet)
Weight: 48 lbs. (19.2Kgs.)
Ny fanorenana tsotra ny 5150 eo amin'ny seha-pifaneranana dia tsy misy afa-tsy ny fiatrehana ny On / Off Switch sy ny asa famokarana gropy izay ahafahana maneho ny mason-koditra marevaka ataon'i Butler Audio ho hita mandritra ny fandidiana.
Izy io dia ilay feo izay mitambatra
Raha ny tena izy, ny Butler Audio 5150 dia mamoaka ny mety ho loharanom-baovaon'ny feo miaraka amin'ny feo mahery, madio, marevaka, tsy mihetsiketsika tanteraka, izay tsy misy afa-tsy ny hoe "Nirvana". Ny feo dia madio sy tsy misy pentina, na inona na inona lanjan'ny habetsahana.
Ny ampahany feo avy ao anatin'ilay setup dia nahitana ny Outlaw Model 950 AV Preamp Processor dia napetraka tamin'ny five-channel opera, Technics DVD-A10 DVD Video / Audio mpilalao, Left, Center, ary ny lohateny Main dia natao tamin'ny Electro-Voice, ny fiaramanidina Dipole Klipsch S-2, ary ny 12-inch KLH powered subwoofers.
Ampifandraisina amin'ny kofehy môtô ny môtô dia nampiasaina, hatramin'ny mpilalao DVD ka hatramin'ny fanolorana ny laharana 5150. Ny hery AC dia mifandray amin'ny fampiasana Belkin Surgemaster mavesatra. Tsy nampiasaina ny subboyofer fanampiny; Nalefa tamin'ny 5150 ny zavatra rehetra tamin'ny alàlan'ny fanombohan-tsofina mba hahitana ny vokatr'ilay 5150. Amin'ny karazana feo rehetra, anisan'izany ny feo mampihetsiketsika DTS (ao anatin'izany ny DTS Sampler Disc # 7) sy ny horonam-peo DVD (anisan'izany ny lahatsoratry ny mpanjaitra ao amin'ny Opera ) ary koa ny horonam-peo mozika an-tariby, ny 5150 dia tsy mampiseho ny fanovana amin'ny fotoana rehetra.
Fintino ny mombamomba ny 5150
1. Ny feo mitsangana dia vokatry ny fametrahana ny tsiranoka vaksiny mivantana eo amin'ny dingana avoakan'ny amperora. Rehefa avy nihaino nandritra ny ora maromaro aho, dia tsy nahatsiaro reraka mihitsy ny sofiko, na dia tamin'ny fihainoana avo lenta aza. Ny 5150 ihany koa dia mifanandrify tsara amin'ny klipsch dipole manodidina ary ny KLH powered ho an'ny mpitaingina miditra satria ny fifandanjana sy ny mitovy lanja rehetra dia natao tamin'ny fampiasana metatra mozika mifandraika amin'ny safidy misy eo amin'ny Outlaw 950.
2. Hookup dia mora. Ny fifamatorana rehetra eo amin'ny tontonana eo an-damosina dia tsara toerana lavitra mba hisorohana ny fikorianan'ny tariby.
3. Ny vatoaratra dia miorina mafy toy ny vatolampy, ary toy ny mavesatra noho ny hafanam-pandriany be dia be mba hihazonana ny fandehanana mafana.
Ny Toe-tsipika - Ny kalitao dia manana vidiny
Na izany aza, na dia eo aza ny zava-misy rehetra, dia misy ny antony tokony handinihan'ny mpanjifa amin'ny fividianana ity fanamafisam-peo ity.
Ny Butler 5150 dia amplifier Power 5-Channel. Mba hahatonga azy io ho ampy tsara dia mila mividy (na manampy) mialoha ny fampiasana preamplifier na Preampeter / AV Processor. Mampifandray ny loharano rehetra amin'ny AV / Preamp Processor ianao, izay manome ny fanovan'ny loharanony rehetra sy ny famerenana / famaritana feo / fihenam-bidy.
Ny preamp / processor, amin'ny ankilany, dia manana lala-tsindrim-peo izay mandefa ny hirahiran'ny audio ho an'ny ampaham-batana, toy ny Butler 5150 voaresaka ato amin'ity famerenana ity.
Ny hery ampiana avy eo dia manatsara ny famantarana ny feo, satria omena azy ireo avy amin'ny fanomanana ny feo ho an'ny mpandray feo.
Amin'ny trangan'ny Butler Audio 5150, te-hividy ny fanombana tsara indrindra momba ny tetibolanao aho ary hanome anao ny fahasamihafana indrindra izay mety ilainao (toy ny famoahana ny vokatra ho an'ny subwoofer sy ny 12 volt DC solosaina hifehezana azy fehin-kery eo amin'ny 5150).
Ankoatra izany, ity ampahan-tsolika ity dia mandany hery be dia be (jereo ny mari-pamantarana sy tebiteby etsy ambony), ka raha miahiahy momba ny volavolan-taratasinao ianao dia tadidio izany. Ny 5150 dia afaka mamorona hatramin'ny 15 Amps amin'izao fotoana izao rehefa mivoaka amin'ny fahefana feno. Ampiasao fotsiny ny fanafoanana ny tampoka izay afaka mitantana farafaharatsiny izany ankehitriny.
Ankoatra izany, noho ny fiparitahan'ny hafanam-be, ity herinaratra ity dia 50kbs mahery vaika, izay tsy zavatra ratsy, mitandrema fotsiny rehefa manangona, manamboatra, na manamboatra ilay fitaovana ho an'ny fiarovana anao manokana.
Farany, ny vidiny: miaraka amin'ny vidin-dàlana amin'ny $ 3,000 eo ho eo, ity dia tsy zavatra izay hitanao amin'ny Best Buy, na ny mpivarotra hafa. Izany dia fampiasam-bola amin'ny fahamendrehana madio sy ny fehezan-kibo tsy misy dikany, ary ny fanorenana mavesatra, tsy fiasa na tsikombakomba. Ny 5150 dia mendrika ny mandinika anao.
Sampan-draharahan'ny tompon-tso-kapila manerantany tompoko 5150
Mijery 4K amin'ny alalan'ny Comcast Cable - Izay Ilainao Fantarina
Ny Klipsch Reference R-4B Sound Bar / Wireless Subwoofer System
Vonona ho an'ny vanim-potoana mandrakizay? Apple TV (2015) Review
Mpanatontosa - Blu-ray Disc Review
Naverina nijery ny Onkyo TX-NR555 Dolby Atmos Home Theater Receiver
Fandefasana mediam-bahoaka Western Digital TV - Review
Mijoroa amin'ny rehetra - Blu-ray Disc Review
Roku sy ny Best Buy Partner amin'ny 4K Ultra HD Smart TVs
5 Fitaovana snapchat ho an'ny dommies (toa ahy)
Inona no atao hoe famandrihana?
Becky! Internet Mail 2.60 - Windows Email Programa
Ny fomba hanangonam-bola amin'ny Amazon
6 Mora ampiasaina amin'ny loko manga ny fampiasana mofomamy mba hampihenana ny dingan'ny dipoavatra
Inona ny RPM File?
Inona ny format HE-AAC?
Ny Nyusus Aries Home + Model NAVS502 Wireless HDMI Kit Reviewed
Inona ny rakitra ODS?
Pejy fanadiovana ho an'ny tranokala
Ny fomba fitantana ny safari cookies
Mametraka iPad tsy misy solosaina
Review: Bluesound Powernode sy Wireless Wireless System
Ohatra fampiasa amin'ny baiko "ping"
Bike Toaster: Mpamorona ny Internet
Top 5 Movie Trivia Lalao ho an'ny iPad
Ahoana no hamahana ny D3dx9_34.dll tsy hita na tsy fahitana diso
Ny Tempoly sy ny Printable Microsoft Day Best St. Patrick
Fa maninona no tia mpihaino tonon-kira mihaino feo